Munamato kuna Santa Muerte kuitira kuti andifunge. ? Maawa makumi maviri nemana
3 Kuverenga Min
Namata kuna Rufu Rutsvene kuti afunge nezvangu Ndeye yekupa kodzero kune ino Musande yekupinda muhukama hwedu kuti atipe rubatsiro rwatinoda.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti uyu ndiwo munamato usingaitwe chete muchiitiko chevaimbobatirana navo asi uchigona kuitwa nguva dzese kuti munhu uyu achengete mundangariro mune zvavaifunga nguva dzese.
Munamato une simba uyo watinofanira kuita nekuchenjerera nekuti mhedzisiro yacho inoshamisika uye inogona kucherechedzwa kubva panguva yatakamira kugadzira munamato.
1 Namata kuna Rufu Rutsvene kuti afunge nezvangu
1.1 Ndirini pandinogona kunamata munamato kurufu dzvene kuti ufunge nezvangu?
1.2 Munamato unoshanda nekukurumidza here?
1.3 Chii chiri munyengetero uyu?
Ndakarasika, ndisina chinangwa, ndisina ushingi uye ndisina rudo.
Ndarasikirwa ndinonzwa, asi ndinotarisira kuzviwana. Sezvandinodanirira kwamuri, rutendo rwangu rwamutswa.
Ini ndinouya kwauri nekuti ini ndoda kupora kuve wangu. Ndafamba mumigwagwa ine rima, ndakawana anotonga rombo rangu.
Nguva dzakaita kuti ndidonhe uye kunyangwe ndakanga ndasimuka, nhasi ndiri pasi ndisina kugona kumira.
Rufu rwakaropafadzwa, ndinzwire tsitsi uye utendeuke kune wangu rubatsiro.
Rufu rwakakomborerwa rwunondidzosera zororo rehupenyu, zadzisa ichi chisikwa chiri pakati.
Komborerwa, cheka ngetani dzinondisunga uye kundidzosera mapapiro ayo akaita kuti ndibhururuke.
Chete mukati mako Ndinovimba, chete kwauri ndinonyengetera, chete ini ndinoda kuti iwe uponese.
Ndidzorere kunzira yeupenyu, Iko kwandinoona meso angu
Iko nzeve dzangu dzinoteerera mimhanzi uye ganda rangu rinonzwa kubatwa kwemhepo inondiperekedza.
Ndidzorere, undidzosere kuti handidi kuenda kure. Ini ndoda kudzoka kuhupenyu.
Ndinoziva kuti unonditeerera, ndinokukumbira, shandura hupenyu hwangu, ndinopikira (vimbisa) sekutenda kunaka.
Ichi ndicho munamato unoyerera kubva pamoyo Zvakanaka, nguva zhinji mumwe wevanhu vanobatanidzwa muhukama angafunga kuti hazvina kukwana ...
Izvo zvinhu hazvisi kufamba sezvavaifanirwa kuita kana kuti imwe imwezve mafuta inodiwa uye ndiko kwairi munamato Inova chombo chakasimba kwazvo chatinogona kuve nacho.
Ndirini pandinogona kunamata munamato kurufu dzvene kuti ufunge nezvangu?
Iwe unoda kuziva kuti iwe unokwanisa kunyengetera riini?
Chero patinonzwa kuda Tinogona kuita munamato uyu nerunyararo uye kuvimba.
Hazvina mhosva kuti tiri kupi, zvinongotora kutenda uye kubva mumweya.
Hazvina basa zuva kana nguva. Chinhu chakakosha kuva nekutenda.
Munamato unoshanda nekukurumidza here?
Minamato yacho pachayo haina imwe nguva yekupindurwa asi panguva ino kune zviuru zvevatendi vanoona kuti minamato inosimudzira Rufu Rutsvene inopindurwa munguva pfupi.
Izvi zvinogona kutsamira pazvinhu zvakawanda sekutenda kana kuomarara kwechidikanwa icho chiri kuyamburwa, zvisinei zvakawoma kuve nechokwadi chechinhu chakadai, saka tinofanirwa kutenda kuti zviito zvinopindurwa munguva yakakwana, kwete kumberi kana shure.
Chii chiri munyengetero uyu?
Munamato wekufunga nezvangu unoshandira kuvapo mundangariro dzemumwe munhu.
Iyo inogona kushandiswa mumamiriro ese ezvinhu anogona kusimuka uye kunyange kune hukama husina chekuita nerudo.
Iwo munamato une simba unofanirwa kuitwa nemutoro nekuti iwo unofanirwa kuve nechinangwa kana chinangwa chekuzadzisa sezvo tisingafanirwe kungogara mupfungwa dzemumwe munhu kana isu tisati tatoronga zvatichaita zvinotevera sezvo zvichinyatsoita.
Izvo zvinogara zvichikura mumasimba emunamato kune iyo Nyakufa Rufu kufunga nezvangu.
Munamato kuna Santa Muerte kuti udzose mudiwa
Holy Holy munamato zverudo zvisingaite